HANOI-NINH BINH-HALONG Vietnam Tour - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
HANOI-NINH BINH-HALONG Vietnam Tour
Tour Price: Tour only Package Deal =US$220 per person for 15 pax group (twin/triple-sharing room at3Star Hotel) Price offer valid till 23rd December 2019 Tour Type: MIS/OT/AS-01/19/Vn(Outbound) Tour Duration:4DAYS/3 NIGHTS
Trip Highlights ခရီးစဉ်၏စိတ်ဝင်စားဘွယ်ရာ
In Ninh Binh, visit Bai Dinh pagoda, the largest complex of Buddhist temples in Vietnam, where the largest bronze Buddha in Southeast Asia is located and has becomeapopular site for Buddhist pilgrimages from across Vietnam
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နင်ဗင်း (Ninh Binh)မြို.၌ အရှေ.တောင်အာရှတွင်အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဒဆင်းတုတော်ဖြစ်ပြီး အမြင့် ၁၀ မီတာ၊ အလေးချိန် တန်၁၀၀ ရှိသော Bai Dinh Pagoda သို့သွားရောက် ဖူးမြော်ရမည်
Visit Halong bay listed asaUNESCO World Heritage Area of outstanding natural beauty
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ နှစ်လိုဘွယ်ရာသဘာဝ ရှုခင်းအလှအပအတွက် ထင်ရှား ကျော်ကြားလျှက် ရှိသော ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် စာရင်းဝင်နယ်မြေ UNESCO World Heritage Site သို့သွားရောက် လည်ပတ်ရမည်ု
A chance to see the performance of the World famous Water puppetry, which isapopular tradition form of entertainment in Hanoi, that dates back as far as the 11th century
ဗီယက်နမ်၏ကမ္ဘာကျော် ၁၁ ရာစု ရှေးရိုးရာ ရေပေါ်ရုပ်သေးပြဇာတ်နင့်အတူ ရိုးရာတေးဂီတ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုကို ကြည့်ရှုခံစား ရပါမည်။
Sightseeing Hanoi’s top tourist attractions, such as, Ba Dinh Square, Ho Chi Minh Mausoleum, Hochiminh resident, One pillar Pagoda, Hoang Kiem lake and Temple of Literature (Van Mieu temple)
ဟနွိုင်းမြို့ ရှိအထင်ကရနေရာများဖြစ်သော Ba Dinh Square, Ho Chi Minh mausoleum, Hochiminh resident, One Pillar Pagoda, Hoang Kiem lake နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သော Temple of Literature (Van Mieu temple), စသည့်နေရာများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရပါမည်
Shopping at Hanoi’s famous 36 old streets
Hanoi မြို့၏ စည်ကားသောနေရာ တစ်ခုဖြစ်သော 36 Old Streets သို့ တွင် ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ် ဈေးဝယ် ထွက်ရပါမည်။
Yangon – Hanoi- Yangon(1st Jun 2019 – 23rd December 2019)
FLT NO ORIGIN DESTINATION DEPARTURE TIME ARRIVAL TIME FREQ AIRCRAFT
VN956 RGN HAN 19:00 21:30 Daily A320
VN957 HAN RGN 16:35 18:00 Daily A320
DAY 01: HANOI- ARRIVAL
DAY 02: HA NOI – NINH BINH-HALONG
DAY 04: HA NOI – DEPARTURE
Ø Accommodation in twin sharing room
Ø Vehicles as tour programs.
Ø Entrance fée.
Ø Private boat at Halong & Ninh Binh
Ø Water puppet show
Ø2bottles of mineral water/day.
Ø Cool Towel EXCLUDED IN TOUR PRICE
Ø International and domestic air-ticket.
Ø Others not mentioned above.
Ø Tip is 3usd/pax/day (group 2-9pax)
Ø Tip is 2usd/pax/day (10pax up)
DAY 01: HANOI- ARRIVAL ( )
Our Travel partner local guide & driver will pick you up at Noi Bai Internal Airport and transfer for Check in hotel. Overnight in Hanoi.
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှ Vietnam Airline ဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့ သို့ထွက်ခွာမည်။
ဟနွိုင်းမြို့ရှိNoiBaiအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ Local Guide မှလာရောက်ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကာ Hotel သို့သွားရောက်၍ Check In ၀င်ပါမည်။
ထို့နောက် ဟိုတယ်တွင် အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
DAY 02: HA NOI - NINH BINH-HALONG (B/L/D)
After breakfast, go to visit Bai Dinh pagoda, to Tam Coc Caves by riding hand-oared sampan after lunch at Nam Hoa restaurant go Halong. Halong night market. Dinner at Bangkok restaurant . Check in hotel & O/n in Halong.
Hotel တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး သာယာလှပသော Ninh Binhမြို့သို့ ခရီးဆက်ပါမည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးဗုဒ္ဒဆင်းတုတော်ဖြစ်ပြီး အမြင့် ၁၀ မီတာ၊ အလေးချိန် တန်၁၀၀ ရှိသော Bai Dinh Pagoda သို့သွားရောက် ဖူးမြော်လေ့လာပြီး နေ့လည်စာကို Nam Hoa restaurant သုံးဆောင်ပါမည်။
ထို့နောက် Tourist attraction တစ်ခုဖြစ်သော Trang An တွင် လှေငယ်လေးများဖြင့် Tam Coc Caves နေရာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း တောတောင်သဘာဝရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုခံစား ပါမည်။ ပြီးနောက် UNESCO World Heritage Site အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသော Ha Long သို့ ခရီးဆက်မည်။
ညစာကို Ha long ရှိ Bangkok restaurant တွင် မြိန်ရှက်စွာသုံးဆောင်ပြီး Ha Long Night Market တွင် ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်ဈေးဝယ် ထွက်ပါမည်။
ညပိုင်းတွင် ဟိုတယ်၌ အေးချမ်းစွာအိပ်စက် အနားယူပါမည်။
DAY 03: HA LONG - HANOI- (B/ L/D)
AM: Takeaprivate boat trip to visit Ha Long bay (A Natural World Heritage) with: Thien Cung grotto, Ga Choi Islet, … Which is crammed with stalactites and stalagmites. There are numerous rocks and islands, which are predominantly composed of hardened dolomite together with smaller amounts of calcium carbonate. Lunch on boat with fresh seafood then go back Hanoi visit Hoang Kiem lake & enjoy water pupet show . Dinner at Anh Hoa restaurant.
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် UNESCO World Heritage Site တစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသောကျောက်ဆောင်များ ကျောက်စက်မိုးမျှော်များရှိ သာယာလှပသော ဟလောင်း ပင်လယ်အော် Ha Long Bay ၏ အလှအပများကို အပျော်စီးသဘောင်္ဖြင့် ကြည့်ရှုခံစားကြပါမည်။ Ha Long Bayတစ်လျှောက်ရှိ ဂူနန်းတော်ဟုခေါ်ဆိုကြသော ThienCung ဂူ နှင့် Dau go grotto အစရှိသည့်နေရာများသို့ အေးချမ်းသာယာစွာ လှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်း နေ့လည်စာကို ပင်လယ်စာ ဖြင့် သင်္ဘောပေါ်တွင် မြိန်ရှက်စွာသုံးဆောင်ပါမည်။
ထို့နောက် ဟနွိုင်းမြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး ဟနွိုင်းမြို့၏ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော Hoang Kiem Lake သို.သွားရောက် လည်ပါတ်၍ ဗီယက်နမ်ရဲ့ နာမည်ကျော် ရေပေါ်ရုပ်သေးပြဇာတ်နင့် အတူရိုးယာ တေးဂီတဖျော်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုခံစားပါမည်။ ညစာကို Minh Anh restaurant ၌ စားသုံးပါမည်။ ဟနွိုင်းမြို.ဟိုတယ်တွင် အနားယူ အိပ်စက် ပါမည်။
DAY 04: HA NOI - DEPARTURE (B/L/)
AM: Pick up at Hotel. Drive to the historic complex of Ba Dinh. Visit Ba Dinh Square, where The Late President Ho Chi Minh declared Vietnams Independence on2September 1945, Ho Chi Minh’s Mausoleum and continue to the One Pillar Pagoda, Van Mieu temple. Lunch with International Buffet at Sen Restaurant.
Shopping at 36 old streets then transfer airport. end of tour.
နံနက်စာကို Hotel တွင်သုံးဆောင်ပြီး ထို့နောက် ဟနွိုင်းမြို့ ရှိအထင်ကရနေရာများဖြစ်သော Ba Dinh Square, Ho Chi Minh mausoleum, One Pillar Pagoda, ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သော Temple of Literature, စသည့်နေရာများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပြီး Local Restaurant တွင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်မည်။ ထို့နောက် Hanoi မြို့၏ စည်ကားသောနေရာ တစ်ခုဖြစ်သော The Old Streets သို့ တွင် ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်ဈေးဝယ် ထွက်ပါမည်။
ထို့နောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ NoiBai Airport မှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ စိတ်အေးချမ်းသာယာစွာ ပြန်လည်ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါသည်။
+ 1 T/L
+2T/L
Hanoi: Moon View II hotel 3*
Halong: Van Hai hotel 3*
Hanoi: City Bay Palace hotel 3*
Halong: New star hotel 3*
Hanoi: Nesta hotel 4*
Halong: Heritage hotel 4*
Hanoi: Lan Vien hotel 4*
Halong: Muong Thanh hotel 4*